सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यौँ । प्रदेश र संघीय सरकारलाई भनिरहेका छौँ तर हाम्रो कुरा सुनिएन
इस्तियाक अहमद साह, अध्यक्ष, नरैनापुर गाउँपालिका, बाँके ।
प्रदेश ५ को दुर्गममध्येको एक गाउँपालिका हो, नरैनापुर । एकैसाथ भारतबाट आएका १ सय १४ व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र एक जनाको ज्यान गएपछि यो देशकै सबभन्दा धेरै संक्रमितयुक्त पालिका पनि भएको छ । खुला सीमाबाट लुकीछिपी आउजाउ हुन थालेपछि क्वारेन्टाइन बस्ने सर्तमा झन्डै ३ सय स्वदेश फर्किए । क्वारेन्टाइन बसेका उनीहरू भारतको मुम्बई, कानपुर र दिल्लीबाट आएका थिए । उक्त गाउँपालिकामा संक्रमितको संख्या सय नाघिसक्दा पनि अझै ८० व्यक्तिको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी छ । व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नहुनु, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कम हुनु र आइसोलेसन अस्पताल नहुँदा क्वारेन्टाइन बसेका शंकास्पद व्यक्ति भाग्ने स्थिति छ । स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइसकेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् । तर केन्द्र, प्रदेश कतैबाट पनि सुनुवाइ नहुँदा नरैनापुरको स्थिति थप भयावह भइरहेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने उपायबारे अध्यक्ष साहलाई जनक नेपालका प्रश्नहरू :
नरैनापुरको अवस्था कस्तो छ ?
नरैनापुरको स्थिति भयावह छ । बिरामी थपिएका थपियै छन् । एक जनाको ज्यान गइसक्यो । १ सय १४ पोजेटिभ देखिए । ८० जनाको अझै रिपोर्ट आउन बाँकी छ । सबभन्दा धेरै संक्रमित भएको क्षेत्रमा अस्पताल छैन । न डाक्टर छन्, न त क्वारेटाइन व्यवस्थित गर्ने साधन–स्रोत नै । खुला सीमामा पुलिस छैन । को, कहाँबाट आइरहेको छ, कुनै जानकारी छैन । हामी बेहाल अवस्थामा छौँ ।
स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको हो ?
हो, सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यौँ । प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई भनिरहेका छौँ तर हाम्रो कुरा सुनिएन । गाउँमा धेरै हल्ला चलाइएको छ । अशिक्षितको बाहुल्य छ । जे हल्ला चल्यो, त्यसैको पछि लाग्छन् । कोरोना लागेसँगै बिरामी अस्पताल गएपछि फर्किंदैनन् भन्ने भय छ । मिर्गौला झिकिदिन्छन् भन्ने अर्को हल्ला चलेको छ । समुदायलाई बुझाउन नसक्दा संक्रमितको भागाभाग छ । नेपालगन्ज, खजुरा र कोहलपुरको आइसोलेसन अस्पताल जान पनि मानेका छैनन् । स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन विशेष स्वास्थ्य टोली मागेका छौँ । तर हाम्रो गुनासो कसले सुन्छ ?
नरैनापुरकै लक्ष्मणपुरमा रहेको अस्पताललाई विशेष अस्पताल बनाउन सकिएन ?
कसले बनाउने ? स्थानीय तहसँग बजेट छैन । प्रदेशले खजुरामा बनाइसकेको भनेर वास्ता गरेन । सांसदहरू पहल गरिरहेका छौँ भन्छन् । केन्द्र सरकारले यत्तिका दिनसम्म हेरेन । अहिलेकै स्थितिमा त कोरोना संक्रमितलाई लक्ष्मणपुर पठाउन सकिँदैन । ३० वर्षदेखि डाक्टर छैनन् । विद्युत् छैन । २५–३० जनालाई राख्न त सकिएला, उपचार हुने स्थिति छैन ।
विकल्प के हुन सक्छ ?
छिमेकी राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा आइसोलेसन बनाउन सकिन्छ कि भनेर सल्लाह हुँदै छ । बिरामी नेपालगन्ज जानै नमानेकाले समस्या भएको हो । अब विकल्प भनेको अस्थायी खाले आइसोलेसन वार्ड बनाउने हो । त्यसका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग चाहियो । सेना लगाएर हुन्छ कि प्रहरी लगाएर, टेन्ट टाँगेरै भए पनि तत्कालै अस्थायी अस्पताल चाहियो ।
मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारसँग कुरा भएको छैन ?
मुख्यमन्त्रीसँग एक महिनाअघि जोखिमबारे कुरा भएको हो । अहिले भएको छैन । नरैनापुर कोरोनाको हटस्पट भइसक्यो भन्ने त कतै लुकेको छैन । प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पनि पक्कै थाहा छ होला । आफैँ जानेर पहल गर्नुपर्ने होइन र ? केन्द्र सरकारसँग कुनै सम्पर्क छैन । जिल्ला प्रशासनमार्फत स्वास्थ्य टोली र थप सुरक्षाकर्मी माग गरेका छौँ । कुनै रेस्पोन्स आएको छैन ।
गाउँको सिंहदरबार भनिने स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थित गर्न सकेन है !
कोसिस त गरेकै छौँ । म दिनरात यसैको तनावमा छु । महामारी फैलिन नदिन कुद्दाकुद्दा मेरो ब्लड प्रेसर नै बढिसक्यो । एकैसाथ तीन सय जनालाई राख्न गाह्रै भयो । स्थानीय घरै जान खोजे । समुदायमा भ्रम फैलियो । त्यसैले क्वारेन्टाइनमा बस्नै मानेनन् । म आफैँ गएर सम्झाएँ– लापर्वाही गर्नुहुन्न, आफ्नै घरपरिवार र समाज बर्बाद हुन्छ भनेर ।
गाउँपालिकाले पूर्वतयारी गरेको देखिएन नि !
सीमामा अलपत्र मान्छेलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । भनेजस्तो भएन ।
हामी प्रदेश र केन्द्र सरकारको बाटो हेरेरै बसेका छौँ । सीमामा व्यापक सेना, पुलिस लगाएर लुकीछिपी छिर्न रोक्नुपर्‍यो । क्वारेन्टाइनमा पनि पुलिस बढाउनुपर्‍यो । सेनाले टेन्ट गाडेर अस्थायी आइसोलेसन अस्पताल बनाएदिए धेरै सजिलो हुन्थ्यो । सबभन्दा पहिले त विशेष स्वास्थ्य टोली आउनुपर्‍यो ।